ကံ့ကော်ချစ်သူတို့ မျှော်နေတဲ့ စာအုပ်အိမ် ၅ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ဈေးရောင်းပွဲလေး လာပါပြီနော်
ကံ့ကော်ချစ်သူတို့ မျှော်နေတဲ့ စာအုပ်အိမ် ၅ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ဈေးရောင်းပွဲလေး လာပါပြီနော် ????
ကံ့ကော်ဝတ်ရည် စာအုပ်အိမ်က ဒီနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ ၅ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျင်းပသွားမှာပါ ????????
စာအုပ်အိမ် နှစ်လည်ပွဲတို့ရဲ့ အစဉ်အလာမပျက် ဈေးပွဲရက်အတွင်း စာအုပ်အိမ်သို့ ကြွရောက်လာမယ့် ကံ့ကော်စာချစ်သူတို့ကို မြန်မာမုန့်များနဲ့ကော်ဖီတို့ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးသွားမယ် ဆိုတာလေးကို ဦးဆုံး ကြေညာပါရစေ ????
စာအုပ်အိမ် ၅ နှစ်ပြည့် ပွဲလေးရဲ့ အချက်အလက် အပြည့်အစုံက ဒီလိုပါတဲ့ခင်ဗျာ …
???? ကျင်းပမည့် နေ့ရက် - ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၁၃ သုံးရက်ဖြစ်ပြီး
⏰ နေ့စဉ် နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၄:၃၀ အထိ
???? ကျင်းပမည့် နေရာ - အမှတ် ၅၁ (ပထမထပ်)၊ ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ရှိ ကံ့ကော်ဝတ်ရည် စာအုပ်အိမ်။
???? (Online က မှာယူသူတို့ကိုလည်း စာအုပ်အိမ်မှာ ရောင်းတဲ့လျှော့ဈေးတွေ အတိုင်း လျှော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ခကတော့ နေရာနဲ့ မှာယူတဲ့ စာအုပ်အရေအတွက် ပေါ်မူတည်ပြီး ကျသင့်ပါမယ်။ cb မှာ စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ online အမှာတွေကို ၁၁. ၁၂. ၂၀၂၁ မှာ စတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ။ လျှော့ဈေး online အမှာများအတွက် ၁၃.၁၂.၂၀၂၁ (ည ၁၂:၀၀) နောက်ဆုံးထားပြီး မှာပေးပါနော်။ ပို့တာကတော့ ဈေးပွဲအပြီး ၂ ရက်လောက်နေမှ စတင် ပို့ပေးမှာပါ)
စာအုပ်အိမ် ၅ နှစ်ပြည့် ပွဲလေးမှာ ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာအုပ်တိုက်ထုတ် စာအုပ်တွေကို
????တစ်ဦးချင်း ၂၀% လျှော့စျေး
????စာအုပ်ဆိုင်များ ၃၀% လျှော့စျေး
????စာကြည့်တိုက်များ ၃၀% လျှော့စျေး
????မိသားစုဝင်ကတ်ရှိသူများကို ၂၅% လျှော့စျေး တို့နဲ့ ရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
* (ရရှိနိုင်တဲ့ စာအုပ်စာရင်းကို Page Pinned Post မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်)
* (သတ်မှတ်ထားသည့် စာအုပ်အမျိုးအစားအချို့အား ၅၀%လျှော့ဈေး စပယ်ရှယ်အစီအစဉ်လည်း ရှိပါမယ်)
???? ၅၀% လျှော့ဈေး သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ်များ စာရင်းကို ထပ်မံတင်ပေးပါမယ်။
ဝယ်ယူသည့်တန်ဖိုးအလိုက် ရရှိမယ့် အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေက -
???? ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူပါက ကံ့ကော်ဝတ်ရည် ဗလာစာအုပ်လက်ဆောင်၊
???? ၃၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူပါက ကံ့ကော်ဝတ်ရည် ဘောလ်ပင် + ဗလာစာအုပ် လက်ဆောင် (သို့မဟုတ်) ကံ့ကော်ဝတ်ရည် အိတ်အသေး လက်ဆောင်၊
???? ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူပါက ကံ့ကော်ဝတ်ရည် လွယ်အိတ်လက်ဆောင် (သို့မဟုတ်) ကံ့ကော်ဝတ်ရည် အင်္ကျီလက်ဆောင်
???? ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးနှင့် အထက် ဝယ်ယူပါက ကံ့ကော်ဝတ်ရည် လွယ်အိတ် (သို့မဟုတ်) အင်္ကျီ + ဘောလ်ပင်+ ဗလာစာအုပ် လက်ဆောင်များကို ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
* ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်း ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ တစ်စောင် *
(ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ထပ်မံတင်ပေးပါမယ် ????)
???? ၃၀၀၀၀ ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်း မိသားစုဝင်ကတ်ကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
???? စာအုပ်အိမ် ကတ်ပြားလေးတွေ ရှိရင်လည်း ယူခဲ့ပါဦး။ ၅၀၀၀ ဖိုး ပြည့်တိုင်း ၁ ကွက်ကို အမှတ်ခြစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အကွက်အားလုံးပြည့်ပါက နှစ်သက်ရာ ကံ့ကော်ဝတ်ရည် တိုက်ထုတ် ၂ အုပ်ကို ၅၀% လျှော့ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ✌????
⚠️ Covid 19 ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ စုပေါင်းကာကွယ်ဖို့ ကံ့ကော်စာချစ်သူတို့ကို အထူးမှာကြားလိုတာကတော့ စာအုပ်အိမ်ကို လာမယ်ဆိုရင် Mask တပ်ခဲ့ကြပါပဲ။ စာအုပ်အိမ် အဝင်မှာလည်း မပျက်မကွက် လက်ဆေးပြီးမှ ဝင်ရောက်ပေးပါနော်။
???? ကိုဗစ်ဟာ အရှင်းမပျောက်သေးဘဲ ရှိနေသေးလို့ ရောဂါကူးစက်မှာလည်းစိုး၊ စာအုပ်လည်း ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် လာမဝယ်ဘဲ အချိန်မရွေး Page CB ကနေ အမှာတင်ပြီး ဝယ်လိုက်ပါ။ စာအုပ်အိမ်ကို လာဝယ်ရင် ရမယ့် လက်ဆောင်တွေနဲ့ ကံစမ်းမဲတွေအတိုင်း ရရှိပါလိမ့်မယ် ????????
✅ ကဲ မျှော်နေကြတဲ့ လျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချိန် ရောက်လာပြီမို့ ဘာစာအုပ်တွေ ဝယ်မလဲ စဉ်းစားပြီး အချိန်မရွေး ပြန်ကြည့်နိုင်အောင် ဒီပို့စ်လေးကို Share ထားပါဦး။ ပြီးတော့ ချစ်ခင်ရတဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းတူသူ ကံ့ကော်စာပေချစ်သူတို့ကို Comment မှာ Mention ခေါ်ပြီး သတင်းပေးလိုက်ကြစို့လား ... ????
ထပ်မံ၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသမျှကို ဖော်ပြပါ တယ်လီဖုန်းများသို့ ဆက်သွယ်ကာ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ☺️
???????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ????
အမှတ် ၅၁၊ ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(09250012348 & 09443041137)
၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီ လအတွင်း အသစ်ထွက်ရှိသောစာအုပ်များနှင့် ပြန်လည်ထွက်ရှိသော စာအုပ်များ
လင်းလွန်းခင်ရဲ့ ၁၅ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲလေး ဒီနေ့ စပါပြီနော် ...
၂၀၂၁ ခုနှစ် စာဖတ်အားနှင့် အကြိုက်ဆုံး ၁၀ အုပ်